मंगलबार, मंसिर २४, २०७६ प्रकाश अधिकारी
आम रूपमा पत्रकारहरू कुन् पुस्तक पढ्दैहुनुहुन्छ भनेर सोध्छन् । तपाईंलेचाहिँ कुन पुस्तक लेख्दैहुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो । यसमा, म सधैँ केही न केही लेखिरहेको हुन्छु भन्ने तपाईंको विश्वास पनि झल्केको पाएँ ।
वास्तवमा म यतिबेला कुनै मौलिक पुस्तक लेखिरहेको छैनँ । म दुई कृतिको अनुवाद गरिरेको छु — नीलम कार्की निहारिकाको मदन पुरस्कार विजेता कृति “योगमाया” लाई नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा, र बङ्लादेशी राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानको जेलको संस्मरण “प्रिजन नोट्स” लाई अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा । फुटकर रूपमा कथा र कविता लेखि नै रहेको छु । हेरौँ सङ्कलन कहिले गर्न सकिन्छ । अँ, केही गीत पनि लेखिरहेको छु । रेकर्डमा जाँदैछन् ।
किन पढ्ने? यानि, मैले लेखिरहेका वा अनुवाद गरिरहेका पुस्तक कनि पढ्ने भन्ने होला ।
मैले अनुवाद गरिरहेको योगमाया मदन पुरस्कार विजेता मात्रै होइन, एक महानारीको जीवनकथा पनि हो । नारी जागरणका मोडेलहरू पश्चिममा मात्रै खोजिरहेको बेला पूर्वमा, त्यो पनि नेपालमा यस्तो ठूलो क्रान्ति सम्पन्न गर्ने योगमायाको कथा पढ्नु जरुरी छ । अचेल नेपाल पढ्न अन्कनाउने तर अङ्ग्रेजी खरर पढ्ने नयाँ पुस्ता पनि आएको छ । त्यस्तो पुस्ताका लागि यो अनुवाद जरुरी छ । जहाँसम्म कारागारका संस्मरणको प्रश्न छ, एउटा छँदै नभएको राष्ट्रका जन्मदाताको आत्मकथा हो । उहाँले बाँचेको जीवन, खेपेको दुःख र पाएको विजयको कथा हो । यसले कसलाई प्रेरित नगर्दा । अलमल अलमलमा रहेको नेपाली राजनीति र समाजिक विकासको पृष्ठभूमिमा यसले सबैलाई प्रेरणा दिन्छ भन्ने हो ।
अब रह्यो मेरो मौलिक लेखन किन पढ्ने भन्ने कुरा ! त्यसमा मेरो कुनै दावी छैन । पाठकले केही पाए पढिदिनुहुन्छ । केही पनि नपाए मिल्क्याइदिनुहुन्छ । त्यो मलाई थाह छ । तर मेरो हकमा म भाग्गेमानी यस मानेमा छु कि प्रौढ पाठकका लागि भनेर मैले नेपाली भाषामा पछिल्लो समय लेखेका तीन पुस्तकले पाठकबाट राम्रो माया पाएकै हुन् । उपन्यास तादी किनारको गीत, कथा संग्रह त्यसपछि फुलेन गोवादरी तथा कविता शून्य प्रहरको साक्षीबारे सबैलाई थाहै छ । तादी ले गोठाले पाण्डुलिपि पुरस्कार तथा त्यसपछि फुलेन गोदावरी ले विमल स्मृति पुरस्कार पाएको पनि यहाँलाई थाहै छ । शून्य प्रहरको साक्षी तेस्रो संस्करणको तयारीमा छ ।
म मेरा आख्यानमा बालबालिका, एक्ला र विक्षिप्त पात्र र समाजको दौडमा पछाडि परेका पात्रको भित्री संसार खोदल्न रुचाउँछु । यानि, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद मेरो लेखनको क्षेत्र हो । यस्तो लेखनले प्रकारान्तमा सबैको कथा भन्दोरहेछ । त्यसैले, तपाईं आफैँ कहाँ हुनुहुन्छ, सायद मेरा कथाले धेरथोर भन्छन् । मैले मेरो लेखनमा, प्रयोगका नाममा कतै पनि भाषाको मर्यादा नाघेको छैनँ । परिवार सबै सँगै बसेर पढ्न मिल्छ । मेरा पाठक सबै उमेरका छन् । र मेरो लेखनमा सबै उमेरको केही न केही कुरा अटाएको हुन्छ । कविताको हकमा मेरा कविता सोझा छन्, र छोटा छन् । यसमा अलङ्कार र उपकरणको भारी कतै पनि पाइँदैन । त्यसैले पढ्न झन्झटिलो र धेरै समय लाग्ने हुँदैन । त्यसैले पढिदिनुभयो भने राम्रै होला ।
अनुवादक, महेश पाैड्याल
योचाहिँ पाठकको स्वभाव, आवश्वयकता, उमेर र स्वादमा भरपर्छ । त्यसैले सबै खाले पुस्तकको माग भइरहन्छ बजारमा । पछिल्लो समयको नेपाली साहित्यमा भने निराशाबाट मुक्ति दिने खालका पुस्तकको माग बढी देखिन्छ । अन्य लोकप्रिय साहित्यमा परिवर्तनको पक्षधरता, सीमान्तकृतको मर्मकथा तथा मिथकको विपठन भएका पुस्तकहरू बढी रुचाइएको मेरो ठहर छ । युवा, यौन र प्रेम त साहित्यको सदाबहार विषय हुँदै हो । तर यसको संयम र कलात्मक प्रस्तुतिभन्दा अलि भद्दा प्रस्तुति बढी आइरहेको छ कि भन्ने पनि मेरो मत छ ।
साहित्यमा भित्रिएको विकृतिबारे तपाईकाे धारणा ?
साहित्यमा थुप्रै विकृति भित्रिएका छन् । तर ती टिक्दैनन् । समयले आफैँ बढारेर लान्छ । पुरस्कार किन्ने, नजिककाबाट सिफारिस गराउने, प्रतिष्ठानहरूमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई बढी लाने, गुटबन्दी गर्ने, राजनैतिक र जातीय समीकरणका आधारमा एकअर्कालाई स्वीकार वा निषेध गर्नेजस्ता विकृति अचेल थुप्रै देखिन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जनाका हरफ र अंश चोरेर आफ्नो बनाउने, सञ्चारमाध्यममा नजिककालाई प्रश्रय दिने, लेखन्दास रोखर लेखाउने, रचना वाचनका केही मञ्चहरूमा र केही सञ्चारमाध्यमका कार्यक्रममा नेपालबाहिरबाट डलर लिएर आउनेले तत्काल ठाउँ पाउने तर देशमै बसेर वर्षौंदेखि तपस्या गर्नेले ठाउँ नपाउने आदि पनि छन् । तर, पाठकलाई यी सबको पोल थाह छ । टिक्दैन ।
युवा पुस्तामा पनि माथि उल्लेखिन विकृतिको छाया देखिएको छ । युवाहरू छिटो लेख्ने, प्रकाशित गरिहाल्ने र सेलेब्रिटी भइहाल्ने होडमा पनि देखिन्छन् । कम पढ्ने र बढी आक्रामक हुने त उमेरै हो । पछिल्लो समय उपन्यासकार वा कवि अवतारमा आएका थुप्रै युवाहरू साहित्याकाशकमा धुलिट्याम भएको हामी धेरैले देख्यौँ । तर यसको विपरीत मैले एउटा यस्तो युवा पुस्तक हुर्कंदै गरेको देखेको छु, जो गम्भीर छ, भाषाको शुद्धतामा सचेत छ, र लेखनको गुणवत्ताप्रति संवेदनशील छ । त्यस्तो जमाततिर मेरो आकर्षण ज्याद्रो छ । म तिनलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु । यत्ति हो, उनीहरू नेपाली र विश्वासाहित्य दुवै क्षेत्रका क्लासिक पनि पढ्दै अगाडि बढून् । क्लासिक नपढी गतिलो लेखक हुन, कमसेकम मेरो विचारमा सम्भव छैन ।
नपढी नहुने पुस्तकमा पनि रुची र स्वभावअनुसार नै हुन्छ । तर, एउटा मान्छे, बलियो साहित्यकार हुनका निम्ति उसले उसको देशको इतिहास, दर्शन र धर्मशास्त्र पढोस् । विश्व साहित्यका मानक ग्रन्थ पढोस् । विश्वको इतिहास पनि पढोस् । वर्तमानमा विश्वभरि के भइरहेको छ, त्यसप्रतिको न्यून्तम ज्ञान राखोस् । विज्ञानको पनि आधारभूत कुराको जानकारी राखोस् । विश्व साहित्य परम्परामा विकसित भएका सिद्धान्तहरूबाट बेखबर ऊ नहोस् । काव्य शास्त्रमा क्रमिक रूपले आएको परिवर्तनलाई पनि उसले हेरेको होस् । यति कुरा भइदियो भने एउटा लेखक सचेत हुन्छ, र सचेत लेखकको उदगार सधैँ समाजका लागि हितकर हुन्छ ।
मलाई साहित्यकै कुरा सोध्ने हो भने सबै लेखकले जीवनकालमा एकचोटी होमर पढून, प्लेटो र अरस्तु पढून, अमरकोश पढून, कालीदास पढून, महाभारत र रामायण पढून, माक्र्स पढून, निच्से र फुको पढून, टेगोर र टनी मरिसन पढून, मार्खेज पढून । अर्कै हुन्छ बुझाइको आयतन । कुनै कृति विशेषका बारेमा भने रुचीमै भरपर्छ ।
बेलायती उपनिवेशको बिगबिगी रहेको बेला, र भारत र चीन पनि झुकेको नेपाल किन उपनिवेशमा परेन? यस प्रश्नको कुनै पनि ठोस जवाफ कसैसँग पनि छैन । यसबारेमा किंवदन्ती र अनुमान मात्रै छन् । कसैले यसको उत्तर लिएर पुस्तक लेखोस् भन्ने मेरो चाहना छ । गोर्खे बीर भन्दै युद्धमा अगाडि सरेर मर्न उद्यत पार्ने गोर्खेहरूले विश्वका धेरै मुलुक चम्काए । तर उनीहरूको आफ्नै मुलुक नेपाल आज अवनतिको यो विन्दूमा छ । यो वीरतको मिथ्या सङ्कथन कसैले तोड्नेपर्छ । कुनै सिद्धान्तकार वा उपन्यासकारले यो गरे हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना छ । धेरै लेखियो नेपाली साहित्य, तर हिमालभित्रको दृष्टिबिन्दुबाट केही अब्बल साहित्य आए हुन्थ्यो भन्ने पनि सोच्छु । हेरौँ । म आफू पनि एउटा सामान्य लेखक हुँ । मैले नै पनि यी क्षेत्रमा कलम चलाए त हुने हो ।
मंगलबार, मंसिर २४, २०७६, ०८:१२:००
बुधबार, मंसिर २५, २०७६ प्रकाश अधिकारी
सोमबार, मंसिर २३, २०७६ प्रकाश अधिकारी
प्रधानमन्त्री ओलीकाे आह्वानमा ११ बजे सर्वदलीय बैठक बस्दै २३ मिनेट पहिले